ဒူးနာေရာဂါ လက္ေတြ့ေပ်ာက္တဲ့ ေဆးနည္းမ်ား စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ – Sharing
Dr Mrs Mg | February 22, 2020 | ျမန္မာ့ေဆး | No Comments
ေျပာသမၽွ ေပ်ာက္နိုး ေကာင္းနိုးရာရ လိုက္သုံးတာလည္းၾကာ ခုထိလည္းမသက္သာ အခုေတာ့ ညစဥ္္ ေဆးစည္းၿပီး အိပ္တာ ၅ ရက္မွာ အေတာ္ကိုသိသာၿပီး သက္သာလာပါတယ္။ေငြလည္းမကုန္ ေဘးထြက္လည္း မရွိတာမို့ ဘာေၾကာင့္နာနာ စမ္းသုံးၾကည့္ပါလို႔။
(၃) ေဆး႐ုံ ၃လေလာက္တက္ခဲ့ရတဲ့ အသိတစ္ေယာက္ ဒီနည္းနဲ႔ေပ်ာက္သြားတယ္။ ၃ ပတ္ေလာက္ ဒူးနာေနတဲ့ က်ေနာ့္ေယာကၡမလည္း ဒီနည္းနဲ႔ပဲ ေပ်ာက္သြားတယ္။ေဆးနည္းကေတာ့ ဂ်င္းတက္နဲ႔ ေျမျဖဴခဲကို ေရာေထာင္းၿပီး နာေနတဲ့ဒူးေပၚကို တစ္ေန႔ ၂ ႀကိမ္ လိမ္းေပးပါ။ ၃ ရက္အတြင္း သိသာလာမယ္။ တစ္ပတ္ေလာက္ဆိုၿပီ ေပ်ာက္ၿပီ။ (ကိုယ္ေတြ႕တစ္ဦး)
ခါးနာ ဒူးနာ သူမ်ားအတြက္ မခက္ပါ …. ဘဲဥကိုပြတ္ေနေသာ ေရေႏြးအိုးထဲ့ကို ၂ မိနစ္ခန္႔ျပဳတ္လိုက္ၿပီး ဆယ္ယူလိုက္ပါ ၊ ဆယ္ယူလိုက္သည့္ ဘဲဥကို ပန္းကန္လုံးထဲ့ကို ေဖာက္ထည့္လိုက္ပါ စားေကာင္းေစရန္ သၾကားအနည္းငယ္ သင္စားေကာင္းေစေလာက္သည့္ အေနအထားသို႔ထည့္ၿပီး ေခါက္စားလိုက္ပါ တျခားမည္သည္အရာမွ ေရာစပ္ၿပီး မစားရပါ ဘဲဥတလုံးကိုေတာ့ ကုန္ေအာင္ စားရပါလိမ့္မည္။
(၉) ေလျဖတ္ ေလငန္းေလးဘက္နာ ခါးနာ ဒူးနာအေရာဂါမ်ားအတြက္ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီးအမွည့္ကိုဖင္ျဖတ္ ေခါင္းျဖတ္၍ သက္ရင္းႀကီးရြက္ႏွင့္လုံေအာင္လိပ္ကာ ( ၅ ) နာရီခန႔္ ျပဳတ္၍တစ္ေန႔သုံးလုံးစီ ( ၅ ) ရက္ဆက္တိုက္စားေပးပါက
ေလျဖတ္ ေလငန္းေလးဘက္နာ ခါးနာ ဒူးနာနာတာရွည္ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းပါသည္။ျပဳလုပ္ပုံလြယ္ကူ၍ အကုန္အက်နည္းကာ အစြမ္းထက္ သက္ေစာင့္ေဆးအားမွီဝဲၾကပါကုန္ ။ (ဝိစိတၱရတနာေျမ)
ဒူးနာ ခါးနာ အဆစ္ျမစ္နာေဝဒနာကို ခံစားေနသည့္ မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး အျမန္ဆုံးေပ်ာက္ကင္းနိုင္ၾကပါေစ။ ကိုးကား – က်န္းမာေရးဝက္ဆိုက္မ်ိဳးစုံ
ဒူးနာရောဂါ လက်တွေ့ပျောက်တဲ့ ဆေးနည်းများ
(၁) ၈နှစ်လောက် ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒူးနာရောဂါကို (၅) ရက်အတွင်းလက်တွေ့ပျောက်တဲ့ ဆေးနည်း
ကျောက်ချဉ်နှင့် လက်ဖက်အသားအစိုပါ (၈) နှစ်လောက် ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒူးနာရောဂါ ကို (၅)ရက်လောက် ကုလိုက်တာ သက်သာပျောက်ကင်းသွားတဲ့ဆိုတဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဒူးနာပျောက် ဆေးနည်းလေးပါ။ မင်္ဂလာပါရှင်လက်တွေ့လေးမို့ မျှဝေပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် အမေက ခုထိ ဒူးနာတာ ၈ နှစ်ပါ အင်္ဂလိပ် မြန်မာဆေးနည်းလည်း စုံနေတာပါ။
ပြောသမျှ ပျောက်နိုး ကောင်းနိုးရာရ လိုက်သုံးတာလည်းကြာ ခုထိလည်းမသက်သာ အခုတော့ ညစဉ် ဆေးစည်းပြီး အိပ်တာ ၅ ရက်မှာ အတော်ကိုသိသာပြီး သက်သာလာပါတယ်။ငွေလည်းမကုန် ဘေးထွက်လည်း မရှိတာမို့ ဘာကြောင့်နာနာ စမ်းသုံးကြည့်ပါလို့။
ဆေးနည်းကတော့ လက်ဖက်အသားအစိုနဲ့ ကျောက်ချဉ်ခဲကို ဆတူထောင်းပြီး နာနေတဲ့ ဒူးခေါင်းမှာ စည်းပေးထားလိုက်ပါ။ မနက်မှာ ပြန်ခွာ နောက်ညမှာ စည်းအိပ်ရုံလေးပါဘဲ။
(၃) ဆေးရုံ ၃လလောက်တက်ခဲ့ရတဲ့ အသိတစ်ယောက် ဒီနည်းနဲ့ပျောက်သွားတယ်။ ၃ ပတ်လောက် ဒူးနာနေတဲ့ ကျနော့်ယောက္ခမလည်း ဒီနည်းနဲ့ပဲ ပျောက်သွားတယ်။ဆေးနည်းကတော့ ဂျင်းတက်နဲ့ မြေဖြူခဲကို ရောထောင်းပြီး နာနေတဲ့ဒူးပေါ်ကို တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။ ၃ ရက်အတွင်း သိသာလာမယ်။ တစ်ပတ်လောက်ဆိုပြီ ပျောက်ပြီ။ (ကိုယ်တွေ့တစ်ဦး)
ခါးနာ ဒူးနာ သူများအတွက် မခက်ပါ …. ဘဲဥကိုပွတ်နေသော ရေနွေးအိုးထဲ့ကို ၂ မိနစ်ခန့်ပြုတ်လိုက်ပြီး ဆယ်ယူလိုက်ပါ ၊ ဆယ်ယူလိုက်သည့် ဘဲဥကို ပန်းကန်လုံးထဲ့ကို ဖောက်ထည့်လိုက်ပါ စားကောင်းစေရန် သကြားအနည်းငယ် သင်စားကောင်းစေလောက်သည့် အနေအထားသို့ထည့်ပြီး ခေါက်စားလိုက်ပါ တခြားမည်သည်အရာမှ ရောစပ်ပြီး မစားရပါ ဘဲဥတလုံးကိုတော့ ကုန်အောင် စားရပါလိမ့်မည်။
ထိုနည်းအတိုင်း နေ့စဉ် ဘဲဥတလုံးစီ စားသုံးရမည်၊ အနည်းဆုံး မိမိအသက်၏ တဝက် အလုံးရေအထိ စားသုံးရမည်၊ ( ဥပမာ ) အသက် ၄၀-နှစ်ရှိလျှင် အနည်းဆုံး ဘဲဥ အလုံးရေ (၂၀ ) စားသုံးရမည်၊ ထိုထက် များများစားသုံးနိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။
ဘဲဥစားသုံးခြင်းသည် လိုအပ်သော ခြင်ဆီဓာတ်အတွက် ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖြစ်ပါသည် ။ ထိုကဲ့သို့ စားသုံးခြင်းဖြင့် ခါး-ဒူးတို့တွင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ခန်းခြောက်ခြင်းကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ခါးနာ ဒူးနာများ သက်သာပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။(မြန်မာ့ဆေးမြည်းတိုများ)
(၉) လေဖြတ် လေငန်းလေးဘက်နာ ခါးနာ ဒူးနာအရောဂါများအတွက် ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးအမှည့်ကိုဖင်ဖြတ် ခေါင်းဖြတ်၍ သက်ရင်းကြီးရွက်နှင့်လုံအောင်လိပ်ကာ ( ၅ ) နာရီခန့် ပြုတ်၍တစ်နေ့သုံးလုံးစီ ( ၅ ) ရက်ဆက်တိုက်စားပေးပါက
လေဖြတ် လေငန်းလေးဘက်နာ ခါးနာ ဒူးနာနာတာရှည်ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါသည်။ပြုလုပ်ပုံလွယ်ကူ၍ အကုန်အကျနည်းကာ အစွမ်းထက် သက်စောင့်ဆေးအားမှီဝဲကြပါကုန် ။ (ဝိစိတ္တရတနာမြေ)
ဒူးနာ ခါးနာ အဆစ်မြစ်နာဝေဒနာကို ခံစားနေသည့် မိတ်ဆွေများအားလုံး အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းနိုင်ကြပါစေ။ ကိုးကား – ကျန်းမာရေးဝက်ဆိုက်မျိုးစုံ